အရုပ်လေးတစ်ရုပ်လို ချစ်စရာကောင်းလာတဲ့အမူအယာလေးတွေ မျိုးစုံပေးနေတဲ့ သမီးလေးရဲ့ပုံလေးတွေတင်လိုက်တဲ့ အာဘွိုင်း – Cele Top Stars
အရုပ်လေးတစ်ရုပ်လို ချစ်စရာကောင်းလာတဲ့အမူအယာလေးတွေ မျိုးစုံပေးနေတဲ့ သမီးလေးရဲ့ပုံလေးတွေတင်လိုက်တဲ့ အာဘွိုင်း
January 2, 2022 By admin2Knowledge
ချစ်လှစွာသောပရိသတ်ကြီးရေ အနုပညာလောကမှာ ပရိသတ်အချစ်တွေနဲ့ အောင်မြင်စွာ ရပ်တည်နေပြီး ချစ်စရာသမီးလေးတွေနဲ့အတူ ကြည်နူးပျော်ရွှင်စရာ မိသားစုဘဝလေးကို လက်တွဲညီညီ ပိုင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းနေတဲ့ စုံတွဲလေးကတော့ အာဘွိုင်းနဲ့ မြတ်ရတနာကျော်တို့ စုံတွဲလေးပါပဲ…. ။
လိုက်ဖက်ညီလွန်းပြီး တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ကြင်နာတတ်တဲ့ ရိုမန်တစ် ပုံရိပ်လေးတွေအပြင် အားကျစရာကောင်းလွန်းတဲ့ မိသားစုပုံရိပ်လေးတွေကလည်း မြင်သူတိုင်းကို အပျော်လေးတွေကူးစက်စေပြီး ချစ်စရာသမီးလေး Scarlett လေးကလည်း အသည်းယားစရာကောင်းလွန်းတာ အမှန်ပါပဲ…. ။
ခုဆိုရင် Scarlett လေးအပြင် Jaden လေးကလည်း ထပ်တိုးလာပြီမို့ အရင်ထက်တောင် ပြီးပြည့်စုံနဲ့ မိသားစုလေးကို ပိုင်ဆိုင်နေမှာပါ ။ အခုလည်း အာဘွိုင်းက အသည်းယားစရာကောင်းလွန်းတဲ့ပို့စ်တွေ မျိုးစုံပေးကာ ချစ်စရာကောင်းလွန်းနေတဲ့ scarlett လေးရဲ့ ပုံလေးေ တွကို ဝေမျှလာပါတယ် ။ ပုံလေးတိုင်းမှာ အရုပ်မလေးတစ်ယောက်လို ချစ်စရာကောင်းလွန်းနေတာကြောင့် ပရိသတ်ကြီးလည်း ကြည့်ရှုနိုင်စေရန် ပြန်လည်ဖော်ပြပေး လိုက်ပါတယ် ….။
ခဈြလှစှာသောပရိသတျကွီးရေ အနုပညာလောကမှာ ပရိသတျအခဈြတှနေဲ့ အောငျမွငျစှာ ရပျတညျနပွေီး ခဈြစရာသမီးလေးတှနေဲ့အတူ ကွညျနူးပြျောရှငျစရာ မိသားစုဘဝလေးကို လကျတှဲညီညီ ပိုငျဆိုငျဖွတျသနျးနတေဲ့ စုံတှဲလေးကတော့ အာဘှိုငျးနဲ့ မွတျရတနာကြျောတို့ စုံတှဲလေးပါပဲ…. ။
လိုကျဖကျညီလှနျးပွီး တဈယောကျကိုတဈယောကျ ကွငျနာတတျတဲ့ ရိုမနျတဈ ပုံရိပျလေးတှအေပွငျ အားကစြရာကောငျးလှနျးတဲ့ မိသားစုပုံရိပျလေးတှကေလညျး မွငျသူတိုငျးကို အပြျောလေးတှကေူးစကျစပွေီး ခဈြစရာသမီးလေး Scarlett လေးကလညျး အသညျးယားစရာကောငျးလှနျးတာ အမှနျပါပဲ…. ။
ခုဆိုရငျ Scarlett လေးအပွငျ Jaden လေးကလညျး ထပျတိုးလာပွီမို့ အရငျထကျတောငျ ပွီးပွညျ့စုံနဲ့ မိသားစုလေးကို ပိုငျဆိုငျနမှောပါ ။ အခုလညျး အာဘှိုငျးက အသညျးယားစရာကောငျးလှနျးတဲ့ပို့ဈတှေ မြိုးစုံပေးကာ ခဈြစရာကောငျးလှနျးနတေဲ့ scarlett လေးရဲ့ ပုံလေးေ တှကို ဝမြှေလာပါတယျ ။ ပုံလေးတိုငျးမှာ အရုပျမလေးတဈယောကျလို ခဈြစရာကောငျးလှနျးနတောကွောငျ့ ပရိသတျကွီးလညျး ကွညျ့ရှုနိုငျစရေနျ ပွနျလညျဖျောပွပေး လိုကျပါတယျ ….။
ခင်ပွန်းဖြစ်သူက သူမအပေါ်(၁၀)နှစ်လုံးလုံး အမှန်တရားကိုဖုန်းကွယ်ပြီး လိမ်ညာခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး နားလည်းခွင့်လွှတ်ကြောင်းပြောပြလာတဲ့ ငွေတီဦး
သမီးလေးတစ်ယောက်ကို ခိုင်”မိသားစုဝင်အဖြစ် ထပ်မံမွေးစားလိုက်တဲ့အကြောင်းပြောပြလာတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ